Shiinaha Cascade warshad soo celinta iyo soosaarayaasha | Dingtaisheng
Cunto diyaar u ah in la cuno, Boorash
> Buuq yar, abuuro jawi deggan oo deggan oo raaxo leh.
Ku hay qaddar biyo ah oo ku habboon salka galka. Haddii loo baahdo, qaybtaan biyaha ah si otomaatig ah ayaa loogu duri karaa bilowga kululaynta. Alaabada kulul-buuxsan, qaybtaan biyaha ah waxaa lagu sii kululayn karaa marka hore haanta biyaha kulul ka dibna waa la isku mudayaa. Inta lagu jiro howsha nadiifinta oo dhan, qeybtaan biyaha ah waxaa si isdaba joog ah ugu wareegaya mashiinka qulqulka badan iyadoo loo marayo saxanka biyaha faafiya ee ku yaal qeybta kore ee retortka, biyahana waxaa loo qeybiyaa si siman min kor ilaa hoose qaab biyo qubeys ah si loo kululeeyo sheyga. Tani waxay hubineysaa xitaa qaybinta kuleylka.
Inta hawsha socoto oo dhan, cadaadiska kujira soo celinta waxaa xukuma barnaamijka iyadoo quudineysa ama ku sii deynaysa hawo isdabamartay iyada oo loo marayo waalka otomaatigga ah ee loogu talagalay soo celinta. Maaddada nadiifinta ee cascade awgeed, cadaadiska ku jira dib-u-celinta saamayn kuma yeelanayso heer-kulku, cadaadiska na si xor ah ayaa loo dejin karaa iyadoo la raacayo baakadaha alaabooyinka kala duwan, taasoo ka dhigaysa qalabka mid si ballaaran loo adeegsan karo (daasado saddex-xabbo ah, laba daasadood oo laba qaybood ah, baakado dabacsan bacaha, dhalooyinka quraaradaha ah, baakadaha caagga ah iwm).
Hore: Soo-celinta jeermiska looga buufiyo biyaha
Xiga: Dhinacyadu waxay buufiyaan jawaab celin